Klopp oo shaaca ka qaaday sirta ka dambeysa guushii ay Liverpool ka gaartay Tottenham – Gool FM
Klopp oo shaaca ka qaaday sirta ka dambeysa guushii ay Liverpool ka gaartay Tottenham
(Liverpool) 27 Okt 2019. Tababaraha reer Germany ee Jurgen Klopp ayaa muujiyay sida weyn uu ugu faraxsan yahay guusha muhiimka ah aheyd ay kooxdiisa Liverpool ka gaartay naadiga Tottenham.
Kooxda Liverpool ayaa si dhib leh kaga adkaatay kooxda Tottenham Hotspur oo marti ku aheyd garoonka Anfield, kaddib markii ay kaga tilaabsatay 2-1, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 10-aad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Jurgen Klopp ayaa ciyaarta kaddib wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “Sky Sports” wuxuu ku sheegay:
“Si fiican ayaan ku bilaawanay, laakiin nasiibka ayaa naga maqnaa, sababtoo ah waxaa naga dhashay goolka koowaad ee ciyaarta, kaddib Tottenham Hotspur si fiican ayey u difaacatay”.
“Weeraradooda gaadmada ah waxay ahaayeen kuwa cajiib ah, laakiin waxa ugu fiicnaa ayaa waxay ahayd inaanan u arkin wax saameyn ah arrintaas”.
Intaas kaddib Jurgen Klopp ayaa wuxuu tilmaamay asbaabaha ay kooxda Liverpool ku awooday in natiijada ciyaarta ay dhinaca kale u dhigto wuxuuna yiri:
”Ma aanan dareemin wax xanaaq ah, waxaanan sii wadnay hirgalinta qorshaheenna wax walbana sida saxda aheyd ayaan u sameynay, goolhaayaha wuxuu badbaadiyay kubaddo badan laakiin waxaan sii wadnay degenaanta”.
“Tottenham aad ayeey khatar u tahay sababtoo ah waxay leeyihiin weeraro degdeg ah laakiin waxaan xakameynay ciyaarta, waxaana ku qasabnay inaan ciyaarta dib kaga soo laabano oo aan gacanta ku hayno marka laga reebo shantii daqiiqo ee ugu dambeysay waxay ahayd ciyaar wanaagsan aad ayaana ula dhacay”.
Si kastaba ha noqotee, Liverpool ayaa guushan ay ka gaartay kooxda Tottenham Hotspur waxay ku sii dheereysatay hogaanka horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, waxayna 6 dhibcood ka sareeyaan naadiga kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City.
Kaka oo shaaca ka qaaday macalinkii ugu fiicnaa uu la shaqeeyay & xiddigii ugu fiicnaa uu kaga horyimid kubadda cagta
Rikoorradii laga diiwaan galiyey kulankii bararbaha ku dhammaaday ee Kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace